Xaalada Degmada Buulo Burde oo kacsan, Shabaabka oo kala baxay xaasaska iyo .. |
Xaalada Degmada Buulo Burde oo kacsan, Shabaabka oo kala baxay xaasaska iyo ..
Xaalad kacsanaan leh, ayaa waxaa laga soo sheegayaa Degmada Buulo Burde ee Gobolka Hiiraan, kadib markii ay soo baxeen in Ciidamada Itoobiya ay fariisimo ka sameysteen wadooyinka ka baxa Baladweyne ee tagga Degmadaasi.
Ciidan xoogan oo Itoobiyaan ah oo wata gaadiid ay ku buufsan yihiin magaca AU, ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii gaaray Xarunta Gobolka Hiiraan ee Magaalada Baladweyne, waxayna xalay dhaq dhaqaaqo Ciidan ka bilaabeen dhinacyada Bariga iyo Galbeed ee duleedka Baladweyne.
Ciidamada Itoobiya, ayaa xalay ka gudbay Deegaanka Baardheere ee duleedka Baladweyne, iyagoo sidoo kalana dhinaca Galbeedka kaga amba baxay Baraagta Cali Ganey.
Wadada dhinaca Galbeed ee ay qaadeen Ciidanka Itoobiya, ayaa waxaa weeyaan mid wareeg ah, oo ay ku doonayaan in ay kaga galaan Degmada Buulo Burde.
Wararka laga helaayo Degmada Buulo Burde, ayaa waxay sheegayaan in Shabaabku ay kala baxeen xaasaskooda iyo caruurtooda, iyagoona geeyay Deegaanka Mukayla ee duleedka Degmada Buulo Burde.
Sidoo kale Ciidamada Al Shabaab, ayaa daafaha Buulo Burde kaga jira daafacyo dhirirsan, iyagoo isku ballaariyay buuraha ka baxsan Degmadaasi, waxayna ku doonayaan in ay ku difaacdaan gacan ku heynta Buulo Burde.
Dhinaca kale Ciidamada Al Shabaab, ayaa waxay baneeyeen gebi ahaanba Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan, waxayna daafacyo ka sameysteen wadooyinka gala Degmadaasi.
Gaadiidka dagaalka iyo Ciidamada Shabaabka, ayaa lagu arkayaa duleedyada Maxaas, iyadoo aynaan wax Ciidan ah ka joogin gudaha Degmadaasi.
Ciidamada Dowladda oo gacan ka helaaya Ciidanka Midowga Afrika ee Amisom, ayaa waxay qorsheynayaan in dhowr jiho ay gulufyo kaga qaadaan Ururka Al Shabaab.